5 Anzọ Animated Explainer Videos Mmụba Inbound Marketing arụmọrụ | Martech Zone
Sọnde, Febụwarị 7, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Mgbe anyị na-ekwu video abụrụla akụkụ dị mkpa nke ndụ anyị kwa ụbọchị, anyị anaghị egwu egwu. Anyị na-ekiri vidio dị na ntanetị kwa ụbọchị na kọmputa anyị, ekwentị anyị na Smart TV. Dabere na Youtube, ọnụọgụ nke oge ndị mmadụ na-ekiri vidio dị elu 60% afọ karịa afọ!
Text-naanị-dabeere weebụsaịtị aghọwo ihe mgbe ochie, na anyị abụghị naanị ndị na-ekwu ya: Google bụ! Nchọgharị # 1 nke ụwa na-enye nnukwu ọdịnaya vidiyo, nke nwere 53x ohere ndị ọzọ nke iputara na peeji mbu ya kari ka webusaiti sitere na ederede. Dabere na Usoro nyocha nke Cisco, site na vidiyo 2018 ga-emejuputa 79% nke okporo ụzọ Internetntanetị niile, site na 66% dị ugbu a. A ghaghị ịkwado azụmahịa ebe ọ bụ na online video ọganihu agaghi a nwayo oge obula.
N'ikwekọ na ihe a, animated nkọwa vidiyo aghọwo icing na achicha nke usoro ahia ọ bụla n'ịntanetị. Kwa ụbọchị ọtụtụ ụlọ ọrụ (nnukwu ụdị na mmalite mmalite) na-eji vidiyo na mgbasa ozi ahịa ha, n'ihi arụmọrụ ha na-agbanwe na ntụgharị na ịpị ọnụ ọgụgụ, n'etiti ọtụtụ uru ahịa ndị ọzọ.
Gịnị bụ Video nkọwa?
An Nkọwa Video bụ obere vidiyo nke na-akọwa echiche azụmaahịa site na akụkọ eserese na-ahụ anya. Ọ bụrụ na foto ruru otu puku okwu, vidiyo bara uru nde - na-enye ụzọ dị mma iji mee ka ndị ọbịa ghọta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị nke ọma.
Nke a bụ vidiyo na-akọwa akọwapụtara na nso nso a anyị mepụtara na Cdọ Akaụntụ Banyere Cdọ, isiokwu siri ike nghọta mere ka ọ dị mfe site na iji vidiyo nkọwa:
E nwere ụdị vidiyo na-akọwapụta dị iche iche - site na vidiyo ọcha dị mfe na ihe ngosi 3-D dị mgbagwoju anya. Nke a bụ nkọwa nke ụdị vidiyo na-akọwa.
Gịnị kpatara nkọwa vidiyo mee mgbanwe na mgbasa ozi ahia inbound? Ka anyi soro usoro mbu nke ahia inbound iji hu otu Nkọwa Video nwere ike ịkwalite mbọ ịzụ ahịa gị site na iji ụfọdụ ezigbo data:
Nkọwa Videos Na-adọta ndị ọbịa na weebụsaịtị gị
Otu isi nsogbu nke ọtụtụ azụmaahịa dị n'ịntanetị bụ otu esi adọta ndị ọbịa ntanetị n'ịntanetị na saịtị ha, na okwu ndị ọzọ, otu esi edozi na ibe mbụ nke Google. Anyị maara na vidiyo ma ọ bụ peeji nke nwere vidiyo nwere ohere ka mma ịbụ ndị a họọrọ na peeji mbụ nke nsonaazụ ọchụchọ n'elu ibe ederede. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ha dị mfe igwu ma kesaa - na-eme ka ha bụrụ ọdịnaya zuru oke iji melite ogo ogo gị.
Vidio bụ ngwa ọgụ na-abụghị nke nzuzo maka SEO (njikarịcha njin ọchụchọ). Nkà ihe ọmụma nke Google abụrụlarịrị ịchọta ọdịnaya dị n'ịntanetị bara uru ma na-atọ ụtọ maka ha; ha makwaara na ndị na-eme nchọnchọ na-ahụ vidio ndị nwere ike ime ka obi dị mmadụ ụtọ ma kuzie ya. Nke a bụ ihe mere Google ji eji amamihe akwụ ụgwọ webụsaịtị site na vidiyo vidiyo site n'ịkwalite ha elu. Igwe ọchụchọ ahụ na-ewere vidiyo dị ka otu n'ime ụdị ọdịnaya kachasị adọrọ mmasị na ebumnuche iji mejuo ndị ọrụ ya site na igosipụta vidiyo na mbụ na nsonaazụ ọchụchọ. Ọ bụghị ihe ijuanya ihe kpatara Google ji zụta Youtube, netwọkụ mmekọrịta na-akpali vidiyo nke ahụ bụkwa ihe nchọgharị nyocha nke ụwa kachasị nke ụwa.
Uru ọzọ nke vidiyo na-akọwa ahịa bụ ha Nkesa. Vidio bụ ọdịnaya dị mfe n'ịntanetị na-eto eto na mgbasa ozi mmekọrịta, yana 12x ohere ndị ọzọ ịkekọrịta karịa njikọ na ederede jikọtara. Ndị ọrụ Twitter na-ekerịta vidiyo 700 kwa nkeji, na Youtube kwa ihe karịrị 100 awa vidiyo na-ebugo n'otu oge ahụ.
Dabere na Facebook, ihe karịrị 50% nke ndị na-alaghachi na Facebook kwa ụbọchị na US na-ekiri ma ọ dịkarịa ala otu vidiyo kwa ụbọchị na 76% nke ndị bi na United States na-eji Facebook na-ekwu na ha na-achọpụta vidiyo ndị ha na-ele na Facebook. Site n'inwe vidiyo na-akọwa na saịtị gị, ikike gị nwere ike ịchọta ma kesaa ya site na ndị na-ege ntị ezubere iche ka mma nke ukwuu mgbe ị na-eji vidiyo.
Mana chere, enwere ihe ndị ọzọ.
Ihe Nkọwapụta vidiyo na-eme ka ndị ọbịa banye na ndu
Ọ dị mma, ugbu a ị jirila vidiyo nkọwa kọwaa nleta gị, olee otu ị ga-esi mee ka ndị ọbịa ahụ bụrụ ndu? Kọwaa vidiyo nyere ika gị aka anapụta zuru okè pitch oge ọ bụla. Ma oge bu ihe di mkpa. Ogologo oge nlebara anya nke mmadụ na ebe nrụọrụ weebụ dabeere na ederede bụ ihe dị ka sekọnd 8, dị ala karịa oge nlebara anya nke azụ azụ ọla edo! Iji jide mmasị ndị ọbịa gị, ị ga-ezipụ ozi gị ọsọ ọsọ na ọfụma. Ọ bụghị naanị ịdọta ha, ọ na-emekwa ka ha nọrọ ogologo oge iji ghọta azụmahịa gị.
Ihe nlere vidiyo nke etinyere n’elu okpukpu na peeji nke ọdịda gị na-eme ka nleta na-arịwanye elu site na nke mbụ 8 sekọnd ruo 2 nkeji na nkezi. Nke ahụ bụ nkwalite 1500% na njikọ aka! Ma oge zuru ezu maka vidiyo iji zipu ozi gị na ịkwanye ndị na-ege gị ntị ime ihe. Iji oku dị irè iji rụọ ọrụ n'ime vidiyo gị nwere ike ịchụpụ ndị ọbịa ịdenye aha na akwụkwọ akụkọ, denye aha maka nnwale n'efu, rịọ maka ndụmọdụ, ma ọ bụ budata eBook. Vidio na-eme ka ndị ọbịa ghọọ onye ruru eru.
Ndi ndu ndi a gha azuta ahia ahia gi nkọwa video?
Ihe Nkọwapụta na-eduga na ndị ahịa
Anyị emeelarị ka o doo anya otú vidiyo vidiyo na-eme egwuregwu na-adọta ndị ọbịa ma gbanwee ha na-eduga, yabụ ugbu a, anyị abịala ọnụ ọgụgụ ndị metụtara nke kachasị mkpa maka azụmaahịa ọ bụla n'ịntanetị: ahịa
Onye na-akọwa vidiyo bụ akụ nwere ikike iji belata ndị ahịa-ọnwụ site na ịba ụba na ịdebe ndị ọbịa ma duru ọnụ ọgụgụ na-adịgide adịgide n'ụzọ niile site na njem ahịa azụmaahịa. Ma olee otu o si eme ya? Ọfọn, ike ike nke nkọwa vidiyo nwere ike iru ndị na-ege gị ntị n'ọtụtụ ọkwa! Lee ụfọdụ ihe atụ:
Great akụkọ na visuals mee ka ndị ahịa gị nwere ike icheta atụmatụ azụmahịa gị: na nkezi ndị mmadụ na-echeta 10% nke data ọhụụ ọ bụla 3 ụbọchị mgbe na ihe ruru 70% nke ozi ọdịyo (nyocha nke Mahadum Western Ontario). Eziokwu na-egosi na 64% nke ndị ọbịa na 85% nke ndị na-azụ ahịa n'ịntanetị nwere ike ịzụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ma ọ bụrụ na ha nwere ike ịlele vidiyo na-akọwa ya tupu oge eruo.
Charactersmụ agwa na-ahụ n'anya ga-eme ka ndị na-ege gị ntị jikọọ na akara gị na ọkwa miri emi miri emi.
E-mail ahịa bu uzo ahia ozo nke nwere ike ibuli elu site na ntinye vidiyo: pịa-site na ọnụego na-enweta a 100% na-abawanye na nkezi na kwa ozi-e nanị site n'okwu video n'isiokwu ha mụbaa ọnụego emeghe ha site na 7 rue 13%.
Ọkara (52%) nke ndị ọkachamara n’ahịa ahịa zuru ụwa ọnụ kwuru vidiyo dị ka ọdịnaya dị n'ịntanetị na nloghachi kachasị mma na ntinye ego.
Nkọwa ihe banyere vidiyo
Egwurugwu, ọrụ nke Hiten Shah na Neil Patel kere, mụbara ntụgharị site na 64% wee mee $ 21,000 nke mgbakwunye ego kwa ọnwa mgbe ha debere vidiyo nkọwa nkọwa na peeji nke ọdịda ha. Nke a bụ vidiyo ha:
Dropbox mepụtara 10% ntụgharị ntụgharị site na vidiyo nkọwa ha, na-eme $ 50 nde na mgbakwunye mgbakwunye na 2012 naanị. Kemmasi, huh?
Vidio Nkọwapụta Na-atụgharị Ndị Ahịa ka Ha Na-akwalite
Yabụ, lee anyị n'usoro ikpeazụ. Have nwere ndị ahịa azụọlarị ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị, ma ha hụrụ ya n'anya! Yabụ, kedu ka vidiyo onye nkowa ga - esi nyere ha aka ịkwalite ha?
Ọ bụrụ na ndị ahịa dị ka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị (na gịnị kpatara na ha agaghị, ọ bụ eziokwu?), Ha nwere ike ịkekọrịta vidiyo gị kọwara na netwọkụ mmekọrịta dịka Facebook, Twitter ma ọ bụ Youtube, na-agbasa ozi ahụ n'ebe ndị enyi na ndị ọrụ ibe ha (don 'Bụrụ onye ihere, gwa ha ka ha kee ya).
Vidio na-akọwa ihe bụ ọdịnaya kachasị okekọrịta n'ịntanetị, nke ahụ bụ ihe na - eme ka ọ bụrụ akụ zuru oke maka ndị ahịa gị ịkwalite gị site na ọwa mgbasa ozi mmekọrịta ha. Dịka ọmụmaatụ, lee vidiyo na-akọwa ihe ruru ihe ruru 45 puku nleta na Youtube naanị:
Kọwaa vidiyo bụ ihe bara uru n'ịtụgharị ndị ahịa gị n'ime obodo, kwa! Anyị na-amata na okwu ọnụ ahịa bụ otu n'ime ụzọ kachasị dị irè n'ịzụ ahịa n'ịntanetị - na ịnye vidiyo maka ndị ahịa gị ịkọrọ banyere azụmahịa gị na-enye ha ike ịkekọrịta ma kwado gị ọsọ ọsọ na mfe.
Ele anyị Pọtụfoliyo Nweta Omenala Quote
Ọ bụ ezie na ego ahụ karịrị ihe ederede, akwụkwọ ozi ma ọ bụ ọbụlagodi akwụkwọ ọcha dị mgbagwoju anya, enwere ike iji vidiyo na-akọwa ihe gafee ndị na-ajụ ase, yana gafee ọtụtụ peeji na ibe ọdịda na saịtị gị. Nke a mejupụtara ikike ya ịkwọ ụgbọala na ịtụgharị ndị ọbịa - na-enye nloghachi dị ịtụnanya na itinye ego.
Tags: nkọwa vidiyoinbound marketingọdịda peeji nke mgbanwevideo mgbanwevideo na ọdịda peeji nkeyum yum vidiyo
M 100% kwenyere na otu vidiyo vidiyo dị mkpa. M nnọọ malitere m ụlọ ọrụ m na-atụ m na akaha-adịghị na-esi n'ime azụmahịa 🙂
Aga m egosi ndị ahịa m n’ọdịnihu ọkwa a ma ọ bụrụ na ha ajụ m ihe kpatara vidiyo ndị a ji dị mkpa. Daalụ!
Ọkt 25, 2015 na 12:32 AM
Ederede ederede! Naanị ihe na-efu bụ ntụnye n'ụdị vidiyo onye kwesiri ịga maka dabere na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọ na-achọ ịkwalite. Dịka ọmụmaatụ, olee otu mmadụ ga-esi kpebie ịga animation 2D ewepụghị - dị ka nke a https://www.youtube.com/watch?v=liGvS4j0lKI ma ọ bụ maka animation 3D - dị ka nke a https://www.youtube.com/watch?v=Q6cx_MJ9nsA ? Kedu ihe ndị ga-eduzi nhọrọ anyị?
Ọkt 25, 2015 na 1:41 PM
Amaghị m na akụkụ ahụ dị oke egwu dịka edemede ahụ. Animation na-enyere gị aka ịkọ akụkọ otu ị ga - achọ si kọọ gị - na - enweghị oge na mmefu nke ịtọlite ​​ihe nkiri, ndị na - eme ihe nkiri, wdg. O di nwute, a na-eji ọha na eze Pixar na 3D animation dị elu nke ukwuu… ma ọ bụrụ na ị gaghị enwe ike dakọtara na mma ahụ, ọ nwere ike ọ gaghị aga nke ọma.
Kedu ka m ga - esi jiri nke a maka ebe ana --agide oku ebe olile anya na - aga oku.
Kedu otu ị ga - esi zụlite ederede ziri ezi ma onye ahịa ma ọ bụ azụmaahịa ọ ga - ewere ụlọ ọrụ na - egwu egwuregwu na - eme ndụ na ndị na - eme ihe nkiri